बिक्री को लागि Liden मा ICA स्टोर – स्टेशन पनि | Holmbygden.se
बिक्री को लागि Liden मा ICA स्टोर – स्टेशन पनि
पोस्ट 20 अप्रिल, 2016 द्वारा Holmbygden.se
“समुदायको लागि दुःखी”, जस्तै अन्य दिन बिक्रीको ICA spool सूचना गर्न फेसबुकमा टिप्पणी बिना छ. आज लेख्छन् Sundsvall Tidning यदि अब बिक्री को लागि छ जो स्टोर. र पर्याप्त थिएनन् भने, ग्याँस स्टेशन, जबकि पनि बिक्री को लागि देख.
म 13 वर्ष प्रति Norlander Liden मा ICA बन्द धक्का, तर अब त्यो नयाँ कुरा प्रयास गर्न निर्णय गरेको छ. उहाँले पनि प्रतियोगिता Sundsvall मा प्रमुख रिटेलर विरुद्ध आज कठिन छ भन्ने टिप्पणी. ICA पनि कुनै पनि नयाँ मालिकसँग अनुबंध साइन इन छैन भनेर घोषणा गरेको छ. यसरी तिनीहरूले रहनेछ, रूपमा लामो प्रति मा झगडा रूपमा. प्रति तथापि, हाल कुनै पनि ठेकेदार संग लिन चाहन्छ कि नयाँ श्रृंखला लागि गर्ला र आशा यो गिरावट मा पूरा गर्न सकिँदैन, धारण.
बिक्री को लागि Macken गर्दा –
“एक जागा – स्थानीय समर्थन गर्न थप”.
यदि रूपमा पर्याप्त थिए,, यसलाई अब केही समय बिक्री को लागि सडक मा ग्याँस स्टेशन हो. ST साक्षात्कार फ्रेडरिकले Krewski उहाँले ग्याँस स्टेशन मा अप भर्न बारेमा छ जस्तै र उहाँले लागि थप मानिसहरूलाई स्थानीय विकल्प चयन गर्न यो जागा-अप कल हुन सक्छ कि आशा.
HBU देखि धन्यवाद!
त्यहाँ गाउँमा पसलमा वर्ष मार्फत Liden जिल्ला गर्न धेरै चाहनुभएको भन्ने कुरामा कुनै शंका छ. त्यसैले पनि हाम्रो लागि “Holm”, Holm मा स्टोर नोभेम्बर बन्द विशेष गरी देखि 2011. Holm जिल्ला का विकास, #ShepherdsHut, हालसम्म आफ्नो प्रयासको लागि प्रति Norlander र आफ्नो कर्मचारी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै साथै लामो तिनीहरूले जारी रूपमा जान्छ भन्ने आशा, र तिनीहरूले लिन चाहने नयाँ उत्तिकै प्रतिबद्ध उद्यमीहरू पाउनुहुनेछ कि. त्यसै गरी, को पाठ्यक्रम Liden Macken.
को ICA Liden आफ्नै तल सन्देश पढ्न. टिप्पणीहरू पढ्न भाषण बबल क्लिक गर्नुहोस्.